HomeAfaan OromooNewsOPDOn baka 2 qoodamte! Sababiin qoodinsa kanas dhaabilee siyaasa Oromoo biyya galaniif kan
Motummaa Naannoo Somalee Abdii Illeen akka hujii gadi dhiisuuf Dr Abiy Ahmadiin ajaja dabarseera.
NEWS: STANDOFF IN DEBRE MARKOS CITY AS ARMY ENTERS TO CALM
gartuun OPDO ka biyyatti galuu ABO mormu, warra siluma sirna democrisii itti amantaa hinqabne fi sagalee uummataa kabajuuf qophii hintaane dha. Warra dorgomaa tokko malee qofaa isaanii uumurii gootuu angoorra ture fedhani dha. keessumaa ilmoo Oromo ta’e hinjifannoo fi jijjiirama dhiiga ijoollee oromootiin argame gara dabarsuudhaan angoo ofii tikfachuuf qofa ammas Oromoon deebi’ee gidiraa waggota 27 keessa dabarse irra kan caalutti galchuuf ta’uun isaa nama gaddisiisa.
Keessuma Obbo Lamma Magarsa kan dhiifama fi mararfannoo guddaa uummata keenya biratti argate jiry otoo ta’uu maaaliif faalla feda uummata dhaabbachuu akka barbaade oromoof galaa hinjiru. Ajjechaa ji’oota 3 darban keessa kara warana karaa daangaa sumalee nurratti banamee jiruun uummatni keenya yeroo kumataan ajjefamanif mada’an guyya tokkllee irra dubbachuu diduu irra darbee, uumatni keenya kara lixa jiru jijjiirama sirna barbaanna jedhanii sagalee dhageessifnaan duula sanyii duguuggii irrati banuun dararaa guddaa irran geessisaa jira. UUmmata waggota hedduu motumma TPLF of irra darbuuf jechaa lubbuu ofii wareega ture innimmoo humna haaraan itti darbuun midhaa caalu qaqqabsiisa jira.
Obbo Lamma fi gartuun isaa waan hojjechaa jiran kana baay’isanii itti yaaduun barbaachisaa dha. Angoon maaliyyuu taanan nama harkatti hinhaftu. Aangoo qabanitti gaarii hojjetanii darbuun kabajaa namaa kenna, jaalala nama arjoomsisa. Obbo Lammaan waggoota lamaan darbaan karaa nagaa irra deemaa ture. Gufanna amma isa mudate akka hatattamaan sirreefatu oromoonni ilaa fi ilaameedhaan gorsuu qabu.
UUmmatni adugna ka Dr. Abiyyif jalaala fi kabaja roobsaa jiru inni gaarii dalagnaani. Warri angoo gubbaa jiran ammoo ija baay’eetu isaan ilaalaa jira, gurra baay’atus isaan dhaggeeffata. Waan gaariis ta’e badaa hojjetan dafee gurra namaa ga’a. kanaas namoota kaan caalaa of eeggachuu qabu. Kanaaf Obboleessa keenya Obbo Lamma nuuf gorsa; Oromoon akka isa jaaltu itti himaa, yoo didee hammatee ammoo ilma ofii dhalchaanu itti dhiisuuf irranfachuun akka jiru itti hima.